Orinasa mpamokatra zava-pisotro sy divay, mpamatsy - Sina mpamokatra zava-pisotro misy alikaola sy divay
750ml vy tsy miova dia afaka forpackaging whisky
Famaritana 750ml vita amin'ny vy tsy misy fangarony ho an'ny fonosana whisky Kaody vokatra BC-F-104 Dimension 104X48X200mm (H) Fampiasana Wisky, divay, kafe, menaka fihinana. sns antsipirihany hafa Ireo rakotra fanaovam-pirinty vy miaraka amin'ny sarony plastika ao anatiny
Tinplate dia afaka miaraka amina aluminium EOE voaisy tombo-kase amin'ny famonosana labiera vaovao
Famaritana famaritana Tinplate afaka amin'ny alimina EOE voaisy tombo-kase amin'ny fonosana labiera vaovao Code Product BC-307 # Dimension Dia 83.5x188mm (H) Fampiasana fonosana labiera vaovao, zava-pisotro, divay, kafe, menaka azo hanina. sns antsipirihany hafa 307 # alim-baravarana mora misokatra aluminium azo ampiasaina amin'ny fitaovana fanaovana tinplate ho an'ny fanamboarana fitoeram-panafody maro karazana. Noho ny fitomboan'ny fitakiana labiera vaovao eny an-tsena, dia mihamaro ny lehilahy mankafy labiera vaovao mba hahazoana tsiro tsara kokoa. Amin'ny alàlan'ny kalon'ny tany amidy amin'ny ...